DHIIG YARI (ANEMIA) Q1. :
DHIIG YARI (ANEMIA) Q1.
DHIIG YARI ( ANEMIA)
Dhiig yaridu waa xaalad caafimad daro oo ay sababtay hoos u dhac ku yimaada tirada unugyada dhiiga cas cas ee jidhka.
Waa xaalad caafimad daro oo ku dhacda dhamman bulshada taas oo inta badan saamaysa dhiiga. Caalamadaha ugu waaweyn ee dhiig yarida waxa ka mid ah madax xanuun, xabad xanuun, and midabka maqaarka oo cadaan noqda. Guud ahaan xaladani waxay saamaysay dad tiradoodu gaadhayso 3 million American ah iyo qiyaastii 1.62 billion oo bulshada caalamka ku nool ah.
Badanaa xaaladani waxay timaadaa kolka uu cudur uu hoos u rido awooda jidhku kusoo saari lahaa unugyada dhiig cas cas oo caafimaad qaba ama kor u kac ku yimaada xadiga burburinta unugyada dhiiga cas cas ama dhiig bax.
Dhiig yari waa tirada unugyada dhiigga cas-cas ( red blood cells) oo ka yar sidii caadiga ahayd.
Unugyada dhiigga cas-cas waxay ogisjiinta u xanbaaraan qaybaha jidhka oo dhan.
Marka ay tirada unugyada dhiigga cas-cas yar yihiin, ogsijiin yar ayaa soo gasha qaybaha jidhka.
Tani waxay qofka ka yeeli kartaa mid dareema in uu daallan yahay oo daciif yahay.
• Dhibaatooyin ka yimaada sida feerada ama birta iyo cuntooyinka kale uu jidhku u isticmaalo
• In aan la cunin cunto ay feeradu ku badan tahay
• Dhiig ka yimaada afka, hunguriga, caloosha ama xiidmaha
• Dhiig ka yimaada hoosta haweeneyda ama dhiig bax badan oo caadada ka yimaada
• Dhallaanka ka yar hal sano ee cabba caanaha lo’da ama caanaha adhiga
• Dhallaanka lagu quudiyo caano boore aan lahayn feero ama bir dheeraad ah.
Haddii aad qabto wax calaamadahaan ka mid ah, takhtarkaaga la hadal.
• Daciif ama daal dareensan tahay
• Maqaarkaaga, faruuryaha, cirridka, indhaha dhinacyadooda, ciddiyaha ama calaacalaha gacmuhu midab beelaan
• Dhibaato ku qabto si kala cad u fekeridda ama jahawareer dareensan tahay
• War-wareer ama miyir beelid
• Neefsashada oo kugu gaabata ama feedho xanuun
• Wadnaha oo si deg deg ah u garaacma
• Dhallaanka iyo carruurta oo si gaabisa u kora.
Kolka jiradani tahay mid yar, calaamadaha kor ku xusan qaar ka mid ah baa qofku la kulmi maraa ama wax calaamad ah iskumaba arko.
Qaar kamid ah dhiig yarida waxay lee yihiin calaamado u gaar ah waxana kamid ah:
1-Aplastic anemia : Qandho, infakshan soo noqnoqda frequent infections, nabaro jidhka kasoo yaaca.
2-Folic acid deficiency anemia : Deganaansho la’aan, shuban, carab qalayl.
3-Hemolytic anemia : midab jaale ah oo jidhku yeesho (jaundice), kaadi midabkeeda oo mugdi isu dhalan roga, qandho, ubuc xanuun.
4-Sickle cell anemia : barar iyo xanuun laga dareemo ruugaga iyo gacmaha, daal, iyo midab jaale ah oo jidhku yeesho (jaundice).
LA WADAAG ASXAAPTAADA.
Next PostDHIIG YARI (ANEMIA)
CALAAMADA (SYMPTOMS) IYO QAABKA LOO BAADHO (DIAGNOSIS) MADAX XANUUNKA. Q3aad.